प्रेम को लागी Oshun लाई प्रार्थना। माया आकर्षित र रिकभर।
प्रेमको लागि ओशुनलाई प्रार्थना
Oshun प्रार्थना। जहिले पनि प्रेमको शक्ति ती आध्यात्मिक हतियारहरू प्रयोग गर्नु हो जुन हामीलाई उत्साहले पठाएको हो।
त्यसोभए याद गर्नुहोस्, पवित्र धर्मशास्त्रमा परमेश्वर आफैले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ, अर्थात् यो अभ्यास विवेक र जिम्मेवारीसहित गरिनुपर्दछ किनकि परिणामले हामीलाई अचम्मित तुल्याउन सक्छ।
1 ओशुनलाई प्रार्थना ओशुन को हो?
2 प्रेमको लागि ओशुनलाई प्रार्थना
4 के ओशुनको लागि प्रार्थना छिटो काम गर्दछ?
ओशुनलाई प्रार्थना ओशुन को हो?
यो योरूबा धर्ममा एक देवता छ। यो विश्वास छ कि उनीसँग प्रेम र सबै भावनात्मक थिमहरुमा एक विशेष शक्ति छ।
यो विश्वास गरिन्छ कि धर्मको सुरूमा महिलाहरुलाई भर्ना गरीएको थिएन र उनको विश्वास अटल भएकोले उनी बहिष्कृत भएको महसुस गर्छिन्।
यस रिसले उनलाई कार्य गर्न उक्सायो जसले त्यस शहरका महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउनबाट रोक्‍यो, यसै कारणले ओडिशाले उनलाई राजी गरेको कुराको गुटमा सहभागी हुन आमन्त्रित गर्न बाध्य पारिएको थियो तर धेरै अनुरोध र बिन्ती पछि यो धेरै नै क्षति भएको थियो। उसले मानिसहरूलाई के गरेको थियो।
जब उनी धार्मिक गतिविधिमा सामेल भए, उनको ईच्छा अनुसार त्यस शहरका सामानहरू सामान्य अवस्थामा फर्किए; महिलाहरू गर्भधारण गर्न सक्षम थिए र पक्षाघात भएका परियोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दछन्।
पृथ्वीको शक्तिहरु द्वारा, आगोको उपस्थिति द्वारा, हावाको प्रेरणा द्वारा, पानीको सद्गुण द्वारा, म ओशुनलाई बोलाउँछु र समाउँछु, द्वारा बल पवित्र हृदय र आँसुको प्रेमकोलागि बग्यो, ताकि तिनीहरू जहाँसुकै भए पनि (जेएमएम) मेरो आत्मामा मेरो अघि (LR) ल्याउँदछन्, मेरो लागि निश्चित रूपमा बाँधेर।
उहाँको आत्मा मेरो प्रेमको सारमा स्नान गर्नुहोस् र मेरो प्रेमलाई चतुर्भुजमा फर्काउनुहोस्।
त्यो (झामुमो) ले कहिल्यै अर्को व्यक्तिलाई चाहँदैन र उसको शरीर केवल मेरो हो (एलआर) मेरो हो।
त्यो (JMM) पिउँदैन, खाँदैन, कुरा गर्दिन, सुन्नेछैन, मेरो उपस्थिति नभएसम्म गाउँदैन।
यस प्रार्थनाको शक्तिद्वारा मेरो सम्झनाहरूले उनलाई सदासर्वदा समातोस्।
मेरो सेतो केटी, Oshun ay उनको शक्ति प्रयोग र उनी (JML) टाढा कुनै पनि महिलासँग जो उनीसँग अहिले छ; र यदि म मेरो नाम कल गर्न थिए।
म (JML) को आत्मा र शरीरलाई बाँध्न चाहान्छु किनकि म उसलाई बाँध्न चाहन्छु र मसँग प्रेममा (LR) चाहन्छु म (JML) मेरो प्रेममा निर्भर रहन चाहान्छु, म उनीलाई पागल भएको देख्न चाहन्छु (LR) मलाई खोजिरहेको जस्तो मलाई (LR) हो। पृथ्वीको अनुहार मा अन्तिम व्यक्ति।
म चाहन्छु कि उसको मुटु मसँग सँधै जोडिएर रहोस्, महान ओशुनको नाममा यो भावना फस्टाउनेछ (जेएमएम) ले उसलाई मेरो २ hours घण्टा कैदमा राख्यो।
ओह ओशुन, तपाईले मेरो लागी ल्याउनु पर्छ (जेएमएम) किनकि म उसलाई चाहान्छु, र म त्यसलाई चाँडै चाहन्छु।
तपाईंको लुकेका शक्तिहरू द्वारा, (जेएमएम) ले मलाई यस ठीक क्षणबाट (LR) लाई माया गर्न थाल्छ र मलाई मात्र (LR) सोच्नुहोस् जस्तो कि म विश्वमा एक मात्र व्यक्ति हुँ।
त्यो (झामुमो) मेरो तर्फ दगुर्दै आयो, आशा र ईच्छाले पूर्ण, कि (जेएमएम) शान्ति छैन जबसम्म ऊ मलाई खोज्न आउँदैन, र ममा फर्केर आउँदैन। ओशुन म तपाईंलाई (JMM) मा ल्याउन बिन्ती गर्दछु।
त्यो (झामुमो) मलाई धेरै माया गर्छ, नम्र आउ र मँ चाहानुहुन्छ। म ओशुनलाई धन्यवाद दिन्छु।
र म सँधै उसको नाम मसँग बोल्ने वचन दिन्छु। आमेन
यो सबै भन्दा राम्रो ज्ञात प्रेमको लागि ओशुनको प्रार्थना हो।
हामीलाई मायाको चीजहरूमा सहयोग पुर्‍याउनु भनेको उनको कमजोरीहरू भेट्टाउन र उनलाई सुदृढ पार्न हाम्रो आत्मीय जीवनमा प्रवेश गर्ने अवसर दिनु हो।
जहाँ समस्याहरू पहिले नै उन्नत भएको छ र त्यहाँ केहि गर्न नसकिने जस्तो देखिन्छ, ती ती केसहरू हुन् जहाँ उनी हामीलाई सहायता गर्न बढी शक्तिशाली हुन्छन्।
प्रार्थना तिनीहरू कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ तिनीहरू एक उपकरण हो जुन हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं जब हामीलाई आवश्यक हुन्छ।
यदि यो सत्य हो भने राम्रो वातावरणमा प्रार्थना गर्न पाउनु राम्रो हुन्छ, तर यो एक विशेष आवश्यकता होईन।
हामी जहिले पनि प्रार्थना गर्न सक्दछौं, जहिले पनि र सबै ठाउँमा।
के ओशुनको लागि प्रार्थना छिटो काम गर्दछ?
प्रत्येक प्रार्थना शक्तिशाली छ यदि यो हृदयमा विश्वासका साथ गरिएको छ किनभने हामी कसैलाई मद्दतको लागि आउन सक्दैनौं जसलाई हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं भन्ने सोच्छौं।
यदि हामी प्रार्थना गर्छौं भने यो हामी प्रार्थनाको शक्तिमा विश्वास छ।
अटल विश्वास अभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ, जसरी हामी सिक्छौं संसार आध्यात्मिक हामी विश्वासमा र प्रार्थनासँग सम्बन्धित सबै कुराको ज्ञानमा बढ्दै छौं जुन हाम्रो जीवनको लागि ठूलो महत्त्वको छ।
प्रेमको लागि ओशुनको प्रार्थनाको अधिकतम शक्ति बनाउनुहोस्!
प्रियजनको फिर्ताको लागि शक्तिशाली प्रार्थना
प्रेमको लागि पवित्र मृत्युलाई प्रार्थना गर्नुहोस्